मोबाइल बैंकिङ्ग र क्रेडिट कार्डमा बैंकहरुको लुट कहिलेसम्म गर्भनर साब ? - Aathikbazarnews.com Aathikbazarnews.com मोबाइल बैंकिङ्ग र क्रेडिट कार्डमा बैंकहरुको लुट कहिलेसम्म गर्भनर साब ? - Aathikbazarnews.com
मोबाइल बैंकिङ्ग र क्रेडिट कार्डमा बैंकहरुको लुट कहिलेसम्म गर्भनर साब ?
नेपालमा जसलाई जे गर्न पनि छुट छ । भन्दा अब फरक पर्दैन होला । नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरुले घुमाई फिराई ग्राहकबाट लुट मच्चाएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । आफ्नै खाताको पैसा चलाउदा पनि बैंकहरुले मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गरेवापत ५० रुपैया देखि १ हजार रुपैयासम्म सेवा शुल्क लिन्छन भन्दा पत्याउन गाह्रो होला तर यो सत्य हो ।
अधिकाशं बैंकहरुले सेवा शुल्को नाममा लुट मच्चाएका मात्रै छैनन् । मनलाग्दी ग्राहकहरुको खाताबाट पैसा लिएको खुलेको छ । २७ वाणिज्य बैंक मध्ये सबैभन्दा बढि मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गरेवापत सेवा शुल्क लिने बैंक हो हिमालयन बैंक लिमिटेड यो बैंकले मोबाइल बैंकिङ्गबाट बारोबार गरे बापद १ हजार पैसा लिने गरेको खुलेको छ ।
यस बैंकका अध्यक्ष सरकारी संस्था कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रमुख अधिकृत तुलसी गौतम छन् । सीइओ प्रथम गर्भनरका छोरा अशोक राणा छन् । तर, यो बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको धज्जी उडाउँदै जथाभाबी सेवा शुल्क उठाएको खुलेको छ ।
मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा शुल्कको नाममा सबैभन्दा कम एनआईसी एशिया बैंकले लिएको देखिन्छ । यस बैंकले मात्रै ५० रुपैया लिएको छ भने हिमालयन बैंकले १ हजार । यो कस्तो लुट हो गर्भनर साब ? एउटा बैंकको ५० रुपैया र अर्को बैंकको १ हजार कहाँ छ नियमनकारी निकाय गर्भनर साब ?
मोबाइल बैैंकिङ्गमा एनबी बैंकले २५०, सानिमा बैंकले २५० सेवा शुल्क लिएको खुलेको छ । यस्तै दर्जनौ बैंकले सेवा शुल्कको नाममा लाखौ लुट्ने गरेको तथ्य वाहिर आए पनि निकम्मा नेपाल राष्ट्र बैंक कारबाही गर्दैन, बोल्दैन अर्थमनत्रीज्यू कारण के हो ?
अर्को कुरा के छ भने क्रेडिट कार्ठ रिनो गर्नु पर्दा २७ वाणिज्य बैंकहरुको आ–आफ्नै शेवा शुल्क छ । तरकारीको मुल्य जस्तै यो कस्तो नियम हो गर्भनर डा. चिरनाजीबी नेपाल ज्यू ?
क्रेडिट कार्ड रिनो गर्दा नबिल बैंकले १ हजार लिने गरेको छ भने अन्य एनएमबी र सानिमा बैंकले ७५०, मेगा बैंकले ४५० सबैभन्दा कम एनआईसी एशिया बैंकले मात्र ५० रुपैया लिने गरेको खुलेको छ । तर राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्क नलिन पटक÷पटक आग्रह मात्रै गरेको छैन । निर्देशननै जारी गरेको छ । तर छाडा रागो जस्तै गरिन मनपरि सेवा शुल्क लिन छुट कसले दियो बैंकहरुलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ज्यू ?
यति मात्रै होइन गर्भनर डा. नेपाल ज्यू खाता बन्दा गर्दा रु ५०० (६ महिना अगाडी गरे) पछि गरे ५० रुपैया लिने वाणिज्य बैंकहरुको पनि कमि छैन । बैंकहरुले कति दिन ग्राहक लुट्ने ? प्रस्ट उत्तर अब गर्भनर नेपालज्यूले होइन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले २ करोड भन्दा बढि बैंकका ग्राहकलाई दिनुपर्दछ कि पर्दैन । सचेत भया ।
वाणिज्य बैंकहरुको नाफा आश्चर्यजनक
सेयर लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए
लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र एनएमबि लघुवित्तको हकप्रद आजसम्म
बिओकेका ग्राहकलाई सिद्धार्थ विजनेश ग्रुप अफ हस्पिटालिटी विषेश छुट